Tamarta dib looga cusboonaysiin karo Koonfurta Ameerika | Cusbooneysiinta Cagaaran
Tomas Bigordà | | Awoodda dabaysha, Tamarta Qoraxda Photovoltaic, Tamarta kuleylka ee kuleylka ah, Tamarta dib loo cusboonaysiin karo
Sanadihii la soo dhaafay Latin America dhowr dib u habeynta tamarta si loo horseedo horumar jaban ee tamarta dib loo cusboonaysiin karo.
Faa’iidada ugu badan waxay ahayd qorraxda, oo hadda ah tiknoolajiyad dib loo cusboonaysiin karo ka raqiisan oo laga heli karo adduunka.
Tusaale ahaan, Kolombiya tamarta sawir qaadista waa qeyb ka mid ah barnaamij loogu yeero Nabada durdurka, taas oo u horseedda iftiin iyo rajo deegaanno sannado badan mugdi ka galay iskahorimaadyada hubeysan iyo ka ganacsiga daroogada.
Dhinaca kale, waddammada sida Chile in sanadkii 2012 wadanku lahaa oo kaliya 5MW tamarta qoraxda maanta ay haystaan ​​in kabadan 362MW iyo 873 MW oo dhismahoodu socdo.
5 Dalal kale
Wadamada kala duwan ee Latin America gudaheeda, Chile waa midka hogaamiya ku darista tamarta noocan ah. Warbixinno dhowr ah ayaa tilmaamaya in "iyada oo leh suuq adag oo loogu talagalay adeegyada ballaaran, Chile ay ku hoggaamisay gobolka rakibidda sawir-qaadista ee 2014, taas oo ka dhigan in ka badan wadarta seddex meelood ka yimid Latin Amerika ". Waxa kale oo uu intaas ku daray oo keliya “rubucii afraad ee Chile waxay rakibtay laba laab qadarka wadarta sanadlaha ee Latin America 2013.
Waxa ugu habboon waa Chile bilaabay sanadkii 2013 iyada oo keliya 11 megawatts oo tamar qoraxda lagu rakibay ah. Xawaaraha uu dalku ku tilaabsaday ayaa u dhigay inuu noqdo hogaamiyaha gobolka, kana horeeyo Mexico iyo Brazil, xaga koritaanka.
Xaqiiqdii, Chile ayaa maal gashatay in ka badan 7.000 Milyan dollar horumarinta tamarta la cusboonaysiin karo toddobadii sano ee la soo dhaafay, oo ay ku jiraan biomass, hydroelectric, wind.
Tusaalaha tani waa in ka badan 80 mashruucyada qoraxda iyo dabaysha ee la ansixiyay sanadihii la soo dhaafay.
Argentina sidoo kale oo aan dan ka lahayn oo aan dan ka lahayn kacdoonka la cusboonaysiin karo, ayaa bilaabay inuu jabiyo barafka isla markaana dhiirrigeliyo tamarta qorraxda. Jujuy, tusaale ahaan, waxaa ku yaal 100% magaalada tamarta qorraxda oo muujisay isbeddelka ka socda Argentina. Waddanku wuxuu rajaynayaa inuu soo saaro 8% jaantuskiisa tamarta qaranka iyadoo la adeegsanayo ilo dib loo cusboonaysiin karo dhowr sano gudahood.
Mexico ayaa sanadkan furtay wajigii ugu dambeeyay ee mid ka mid ah dhirta qoraxda ee ugu waa weyn Latin America. Aura Solar I waxaa lagu rakibay Baja Kalifoorniya Sur mudo 2013 bilood oo kaliya ah laga bilaabo bisha Sebtember XNUMX waxay bilawday inay ubadasho falaadhaha cadceedda una badalato mid kale oo durba gaadha qayb kamida wadanka.
Sannadkan, warshaddu waxay furi doontaa gebi ahaanba, iyada oo soo saaraysa tamar nadiif ah oo ay ku quudiso malaayiin reer Mexico ah. Xarumaheeda ayaa degan 100 hektar oo ka mid ah Beerta Warshadaha ee La Paz. Dowladda Mexico waxay iftiimisay in warshadda Aura Solar oo leh 131.800 oo unug ay yareyn doonto wasakheynta 60 kun oo tan oo ah CO2 sanadkiiba.
Sidoo kale waddamada sida Peru waxay dhiirrigelinayaan isticmaalka tamarta qorraxda. Caqabada waaxda ayaa ah inay tamar u keento 2,2 milyan reer Peruvian ah oo ku nool miyiga iyada oo loo marayo fidinta shabakadaha iyo xalalka aan caadiga ahayn sida baalayaasha qoraxda, taas oo lagu bixin doono maalgelin, rakibid, hawlgal iyo dayactir. .
En Panama, 31 shirkadood ayaa kaqeyb qaatay hindisadii ugu horeysay ee soo iibinta tamarta cadceeda oo aad u balaaran sanadkii hore. Mashruucu wuxuu soo bandhigayaa qandaraas dhan 66 MW oo leh a maalgashi oo ku saabsan $ 120 milyan
Guatemala Waxay leedahay mid ka mid ah dhirta ugu weyn ee loo yaqaan 'photovoltaic dhirta' gobolka oo leh 5 MW awood waxayna ku dhowdahay 20 kun baararka qoraxda. Toddobaadkan Eduardo Font, Maareeyaha Guud ee warshadaha waraaqaha Painsa, wuxuu sheegay inay qorsheynayaan maalgashi dhan 12 milyan oo doollar warshad ku shaqeysa qorraxda oo 8MW ah.
Bangiga Horumarinta Jarmalka (KFW) ayaa la siiyay El Salvador amaah ah 30 milyan oo doolar oo deyn ah shirkadaha yar yar iyo kuwa dhexdhexaadka ah ee tamarta la cusboonaysiin karo, gaar ahaan qoraxda. Dowladda El Salvador iyo seddex shirkadood oo korantada korontada ku shaqeeya ayaa kala saxiixday afar qandaraas oo wax soo saar iyo soo saarid ah 94 megawatts oo tamarta qorraxda ah taasoo ku dhow 250 milyan oo doolar.
Honduras Waa waddanka hoggaanka ku haya qoraxda dhammaan Bartamaha Ameerika iyo kan saddexaad ee kobaca Latin America. Waqti yar gudahood, waxay ka hirgalisay darsin warshad qoraxda Choluteca iyo gobolada kale ee dalka.
Sanadkii 2013 Shiinaha iyo Costa Rica waxay saxiixeen heshiisyo gaaraya 30 milyan oo dollar oo lagu maalgalinayo rakibidda 50 kun oo baalayaasha ku shaqeeya cadceedda. Sidoo kale bilowgii sanadkan Machadka Korantada ee Costa Rican (ICE) wuxuu ku dhawaaqay horumarka qorshe tijaabo ah oo loogu talagalay isticmaalka tamarta qorraxda ee la doonayo in lagu gaaro 600 kun oo macaamiil ah. 7-dii sano ee la soo dhaafay, 1,700 bilyan oo doolar ayaa lagu maalgeliyey mashaariic kala duwan oo tamarta la cusboonaysiin karo (qorraxda, dabaysha, korontada, iyo kuwo kale).
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo ee Koonfurta Ameerika